Mitambo yechinyakare yekutamba online | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida classic video mitambo, mitambo ye retroNdine chokwadi chekuti zvandichataura pano zviri kuzokufadza. Unogona here kufungidzira uchikwanisa kutamba mitambo yemavhidhiyo senge Prince Of Persia, Wolfenstein, Warcraft, nezvimwe, pasina kuisa chero emulator? Ingo vhura webhusaiti yako, sarudza mutambo wevhidhiyo iwe waunoda kutamba uye utange mutambo wako MAHARA. Zvakanaka izvo zvinogoneka neiyo peji Vadivelu Comedy PlayClassic.
Pane ino peji iwe unowana yakafarikana katarogu yechinyakare chikuva vhidhiyo mitambo senge Nintendo, MS-DOS, SEGA, nezvimwe. Uye kune izvi, vagadziri vayo vatangisa iyi yepamhepo sevhisi vachishandisa sevha ine akati wandei emulators akaisirwa kuitira kuti iwe ugone kumhanya mutambo uye kutamba kubva kumutengi, ndiko kuti, kubva kune yako yekushandisa system nekushandisa kuri nyore kwewebhu webhu.
Pakati pevamiririri vakashandiswa kumutsiridza iyi katarogu yemazita ezve retro mamwe anozivikanwa se DOSBox, emulator inowanikwawo kuLinux uye iyo inobvumidza iwe kumhanyisa software yemuno kubva kuMicrosoft's DOS chikuva, sezvauchazoziva kana iwe ukaverenga LxA, nekuti haisi nguva yekutanga kuti titaure nezvayo. Asi mamwe emulators anoshandiswawo kune mamwe mapuratifomu, akadai seclass consoles andataura pamusoro apa.
En webhu Iwe unokwanisa kuwana menyu yayo kuti uende kumatunhu akasiyana, akadai seanonyanya kutambwa, iwo eDOS, iwo eWindows, iwo enyaradzo senge SEGA, Nintendo NES, SNES, nezvimwe. Sarudza chikamu, shandisa mafirita kuti uwane yaunoda, tinya pairi, uye uchakwanisa kuona ruzivo nezve mutambo wakasarudzwa wevhidhiyo uye bhatani rinoti "Ridzai online!" Iro rinoonekwa kuitira kuti ugone kuzvivaraidza ... Zviri nyore kudaro!
Nenzira, kana iwe ukapinza ENTER, zvinodzora zvakasungirirwa pahwindo, kuti ubudise iyo inotora uye ugone kubuda, iwe unofanirwa kungodzvanya ESC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mitambo yechinyakare yekutamba online